jeudi, 14 octobre 2021 19:38
Antananarivo Renivohitra : Natombola ny fizarana karinem-pokontany misy “QR Code”
Nanomboka androany ny fitsinjarana ireo karinem-pokontany vaovao, izay efa misy famantarana manokana na "QR Code" hahafahana manangona sy mandrakitra ny mikasika ny tokantrano tsirairay isam-pokontany.
Ny Fokontany Ambatobe Boriborintany faha-5, Ankorondrano Andrefana Boriborintany faha-3 ary Ampefiloha Ambodirano ao amin’ny Boriborintany faha-4 no nisantarana izany.
Hanamora bebe kokoa ny fanisana ny mponina ny fampiasana ny karinem-pokontany vaovao, ary hanamora ny fanomezana ireo taratasim-panjakana isan-karazany eny anivon'ireo Fokontany, ary koa hahafahana mahalala ny mikasika ireo karazana fanampiana azon'ny tokantrano ho sitrahana avy amin'ny Fitondram-panjakana, toy ny Tosika Fameno, Vatsy Tsinjo, Sosialim-bahoaka, sns.
Miara-dalana amin'ny fampitaovana ara-informatika ireo Fokontany miisa 192 eto Antananarivo Renivohitra ny fanaovana karinem-pokontany vaovao. Hisy fanomezana solosaina sy tetikasa fametrahana Internet amin'ny alalan'ny HOTSPOT WIFI eny anivon'ny Fokontany, ka ny tanjona dia ny hametrahana tanàna nomerika.
jeudi, 14 octobre 2021 19:11
Digue Ambohitrimanjaka : Nikatona ny 90%-n'ireo mpivarotra sy mpanao asa-tanana noho ny "Covid-19".
Misedra olana maro ireo mpivarotra sy mpanao asa-tanana eny amin'ireo trano heva eny amin’ny sampanana Ambohitrimanjaka, takaitra navelan'ny valanaretina Covid-19.
Ny 90%-n'izy ireo no nikatona vokatry ny fikatonan’ny sisintany ka tsy nahatongavan'ny vahiny, izay isany tena mpanjifa ny vokatr’izy ireo. Olana ihany koa ny tsy fahafahana mandefa any ivelany ireo asa-tanana vita amin'ny hazo sarobidy efa voahodina, ny tsy fahampian'ny akora fototra...
Nidina teny an-toerana, nijery ny zava-misy, nihaino sy nifampiresaka tamin’ireo mpivarotra sy mpanao asa-tanana ny Minisitry ny Asa-tanana sy Hai-tao, Sophie Ratsiraka. Nilaza ity farany fa misy ireo lalàna tsy maintsy hiarahana midinika amin'ireo Ministera isan-tsokajiny hamahana ny olana.
Nohamafisiny koa anefa ny tokony hambolena ireo akora fototra mba ho lovain'ny taranaka any aoriana sy handovan'ireo zanaky ny mpanao Asa-tanana ny asan'ny Ray aman-dreniny teo aloha, fa tsy hitango sy handripaka azy ireny fotsiny.
jeudi, 14 octobre 2021 18:18
14 oktobra : Notsaroana tao Antsohihy ny naha Repoblika an’i Madagasikara
14 oktobra 1958 - 14 oktobra 2021, feno 63 taona katroka androany ny naha Repoblika an’i Madagasikara. Tsy nisy ny fankalazana nasionaly, saingy niavaka ny fankalazana tao amin’ny Faritra Sofia.
Tao Anahidrano, tananan’i Filoha Philibert Tsiranana no nanamarihana sy nankalazana izany‚ izay notarihin’ny Governoran'ny Faritra Sofia, Jeneraly Lylyson René de Rolland.
Tsaroana isan-taona ary tsy maty kosehina amin’ny tantaran’i Madagasikara ny nahazahoana ny fahaleovantena sy nahaterahan’ny Repoblika voalohany izay notarihin’ny Filoha Tsiranana, zanaky ny Faritra Sofia‚ hoy ity farany.
Nanamarika ny fotoana ny dihy sy vakodrazana ary nofon-kena mitam-pihavanana tao amin'ny tranon’ny Filoha Philibert Tsiranana. Teo koa ny fandokoana sy fanatsarana ny tsangambato mipetraka eo anoloan’ny EPP Philibert Tsiranana‚ sekoly nianarany voalohany ao Anjiamangirana‚ Distrikan'Antsohihy.
jeudi, 14 octobre 2021 18:16
Kolo TV : Fandaharana Ankitsimpo, Zoma 15 oktobra 2021 08ora 45min alina
Ho vahinin'ny fandaharana Ankitsimpo, miaraka amin'ny mpanao gazety HENRI Florien, ao amin'ny fahitalavitra Kolo TV, ny Zoma 15 oktobra 2021 amin'ny 08ora 45min alina, ny Solombavambahoaka voafidy tao amin'ny Boriborintany faha 2 Antananarivo, sy Patrick Raharimanana filohan'ny antoko Vitantsika io.
Famerenana ny Talata 19 oktobra 2021 amin'ny 01ora tolakandro.
Azonao arahina mivantana amin'ny facebook.
jeudi, 14 octobre 2021 09:42
Ambatofinandrahana : Dinika fandriampalemana sy asa fanamboaran-dalana
Voasokajy ho isany faritra mena amin’ny asan-dahalo iny Distrikan’Ambatofinandrahana, Faritra Amoron’i Mania iny.
Tsy ekena intsony izany, hoy ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena sady solombavambahoaka voafidy tao Ambatofinandrahana, Razanamahasoa Christine, raha tonga nitsidika tao amin’ity Distrika nahavoafidy azy ity izy, niaraka tamin'ny Goverinoran’ny Faritra Amoron’i Mania, Radaloson Mamiarisoa Aline.
Sady mahamenatra no fanetriben’ny firenena ny asan-dahalo, hoy Razanamahasoa Christine, ka tsy maintsy apetraka ny paikady rehetra hamongorana izany.
Anisany nametrahana toby miaramila BOA (Base Opérationnelle Avancée) ao Ambohitsaony Ambatofinandrahana, izay nitondra filaminana ho an'ny Distrika, na dia tsy mbola 100% aza hatreto ka mbola tohizana ny ady.
Air Madagascar : Bokan’ny trosa noho ny goragora sy kolikoly ary ny tsy fahaiza-mitantana
Taorian’ny fivorian’ny Filankevim-pitantana sy ny fangatahan’ny kaompania Air Madagascar dia nentin’ny Minisitera misahana ny Fitaterana, amin’ny maha mpiahy ara-teknika azy, teto anivon’ny Filankevitry ny Minisitra, ary nankatoavina ny hidirana amin’ny « procédure collective d’apurement de passif » an’ity orinasa lehibe ity, satria efa manodidina ny 80 tapitrisa dolara ankehitriny ny « déficit opérationnel / perte cumulée ».
Araka izany dia tena midangana sy avo dia avo tokoa ny trosan’ity orinasam-panjakana Malagasy lehibe ity.
Araka ny lalàna mifehy ny orinasam-panjakana na « société à participation publique » dia ny Filankevitry ny Minisitra no manome alàlana ny hidirana amin’izany « procédure collective d’apurement de passif » izany.
Nisy ny goragora sy ny kolikoly, fa indrindra ny tsy fahaiza-mitantana tao amin’ny orinasa Air Madagascar. Tsy nisy « rigueur » teo amin’ny sehatry ny fitantanam-bola hatrizay, ary tsy nisy fitsinjovana mihitsy ilay orinasa.
jeudi, 14 octobre 2021 09:11
Habakabak’i Madagasikara : Hisokatra amin’i Eoropa sy eto anivon’ny Ranomasimbe Indiana
Nankatoavin’ny filankevitry ny minisitra ny alarobia 13 oktobra 2021 ny fisokafan’ny habakabak’i Madagasikara amin’i Eoropa mankaty Antananarivo, miaraka amin’ny Air Madagascar sy Air France.
Afaka miditra ihany koa arak’izany ireo « vols charters » avy any Milan/Rome Eoropa mankany Nosy-Be Hell-Ville.
Mikasika ny sidina na « vol long-courrier » Europe dia hanomboka amin’ny 06 Novambra 2021 izany.
Nankatoavina ihany koa ny fisokafan’ny lanitr’i Gasikara amin’ny sidina eto anivon’ny Ranomasimbe Indiana izany hoe : Maurice –Madagasikara (Air Mauritius) sy La Réunion- Madagasikara (Air Austral) ka vinavinaina amin’ny 23 Oktobra 2021 ho avy izao no hiatombohan’izany.
Ankoatry ny « évacuation sanitaire » dia mila “autorisation spéciale”, izay ankatoavin’ny Praiminisitra sy ny Filoham-pirenena ny fidiran’ny « Jet privé » na ny « sidina tsy miankina manokana ».
Ireo fepetra mifandraika amin’izao fisokafan’ny habakabaka izao :
jeudi, 14 octobre 2021 09:10
Ministeran'ny Fitaterana : Voatendry ho Coordonnateur Général des Projets i RAZAFIMBELO Alain
Noraisina ny didim-panjakana manendry an’Andriamatoa RAZAFIMBELO Alain Manajary, ho « Coordonnateur Général des Projets » eo anivon’ny Minisiteran’ny Fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro, nandritra ny Filankevitry ny minisitra ny alarobia 13 oktobra 2021.
Izy moa dia efa nitazona ny andraikitry ny minisitry ny Asa vaventy nandritra ny Tetezamita, ary efa niasa tany amin'ny ambasadin'i Madagasikara tany Alemanina. Vadin'ny Solombavambahoaka Marie Goulamaly, voafidy tany amin'ny Distrikan'i Tsihombe, Faritra Androy.
jeudi, 14 octobre 2021 08:50
Faritra Betsiboka : Voatendry ho Governora Randrianjafinindrina Jean Roger
Noraisina nandritra ny filankevitry ny minisitra ny 13 oktobra 2021 ny didim-panjakana manendry an-dRandrianjafinindrina Jean Roger ho Governoran’ny Faritra Betsiboka.
Betsiboka no namarana ny fanendrena Goverinora, raha efa roa taona mahery ny ankamaroan’ny faritra no nanana Goverinora.
Efa Lehiben’ny Faritra Betsiboka tamin’ny tetezamita Randrianjafinindrina Jean Roger. Efa solombavambahoaka voafidy tao amin’ny Distrikan’i Tsaratanana ihany koa.
Zanak’i Tanambe, Faritra Alaotra ny tenany.
jeudi, 14 octobre 2021 08:47
Jirama : Nesorina ny Tale jeneraly Vonjy Andriamanga
Nesorina tsy ho Tale jeneralin’ny orinasa Jirama i Vonjy Andriamanga. Nofoanana nandritra ny filankevitry ny minisitra ny alarobia 13 oktobra 2021 ny didim-panjakana nanendrena azy tamin’io toerana io.
Notendrena ho mpisolo toerana vonjimaika Radanielina Rivo.
(Sary nindramina, Radanielina Rivo)